Gumaata Kaampaasii 3: Yunvarsiitti warra gargaarsa addaa barbaadaniif eenyutu jira? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Barattuu qaroo dhabeeyyii Xurunash Hiikaan Yunivarsiitii Haramaayaatti baratti
Qaamni hawaasaa hir'ina qaamaa qaban akkuma nama kamii of danda'uun jireenya isaanii mo'achuu barbaadu. Kana taasisuuf ammoo carraa barnootaafi hojii ittiin argachuu danda'an mijeessuufii gaafata.
Ragaan dhaabbilee gara garaa akka agarsiisanitti namoonni hir'ina qaamaa qaban miliyoona 15 ta'an Itoophiyaa keessa jiraatu. Isaan keessaa ammoo harki caalaan baadiyaa bakka carraan barnootaa qajeelaatti lammilee rakkoo akkasii kana qabanii hin jirre jiraatu.
Itoophiyaa keessatti namoota hir'ina qaamaa qaban keessaa %95 kan ta'an hiyyummaa keessa jiraatu. Kanaaf jecha hedduun isaanii jireenya isaaniif jecha maatii isaanii irraatti hirkatu.
Qorannoowwan kunneen akka agarsiisanitti manneen barnootaa sadarkaa gadi aanaa irraa jalqabee hanga dhaabbilee ol-aanoottis haalli kutaa hawaasaa hir'ina qaamaa qabanii mijeeffame hin jiru.
'Cittoo irratti fanxoo' akka jedhan ta'ee simannaafi ilaalchi namoota hir'ina qaamaa qabaniif hawaasa bal'aa keessa jirus rakkoo dha.
Rakkoo dachaa namoonni qaroo dhabeeyyiin jireenya isaanii keessatti mo'achuuf wallaansoo qaban kan barattuu Xurunash Hiikaa agarsiistuu sirriidha.
Xurunash seenaashee Kaampaasii Yunvarsiisii Haroomaayaa irraa akkas jetti.
Ani Xurunash Hiikaadha. Barattuu qaroo dhabeettiidha. Yeroo ammaa Yunivarsiitii Haramaayaatti barnoota Sooshiyoloojii barachaan jira.
Erguman dhaladhee waanuma tokko tokkootin qaroon kiyya baduu danda'e. Iji tokko daa'imummaani inni tokko immoo ergan of baree waggaa jaha erga taheeti bade.
Qaroo dhabeettii ta'ani barachuun rakkoo hedduu qaba.
Dhaloonnikoo Wallaggadha. Kanin dhufe baadiyyaa irraati. Maatiinkoo qabeenya hin qabani. Obboleessikoo hojii humnaa hojjete rakkoo guddaan asi gahe.
Bakka dhihootti manni barnootaa qaroo dhabeeyyii hin jiru ture. Sababa kanaaf, gara magaalaa Baakkoo deemee mana barnootaa qaroo dhabeeyyii seene.
Achitti oolmaa daa'immanii hanga saddeetitti baradhe. Kutaa 9-12 immoo Sabbataattin baradhe.
Yeroon Baakkotti baradhe sana dhaabbata wayiitu nu gargaara ture. Yeroo sana haalli mijaa'aadha. Kitaabillee yoo jiraachuu baate haalli barnootaa ni mijata ture.
Bara 2010 immoo Yunivarsiitii Haramaayaa Muummee Sooshiyolojii nagahee achi seene.
Haalli yunivarsiitii keessa jiru mijaa'aa amiti. Yunivarsiitiin hanga humna isaa nu gargaaraa jira. Haata'u malee, namoota kadhanneeti kan barnoota keenya qayyabannu.
Kitaabni gahanillee yunvarsiitii kana keessa akka hir'ina keenyaatti kan nuuf qophaa'e hinjiru . Sababa kanaaf qabxiin kiyya gadi na jalaa bu'aa jira. Fedhii ani barnootaaf qabu immoo guddaadha.
Yunivarsiitiin rakkoo qabnu furaa jiraatus hanga nuti yaadnutti nuuf furaa hinjiru. Manni barumsaa keenya kitaaba bireeliidhaan barreeffame tokkoyyuu hin qabu.
Wanti Waaqayyoo boru godhu hin beekamu jedhee dhiibbadhe barachaan jira. Wanti naaf mijate tokkoyyuu hinjiru.
Mummee ani baradhu keessa ana qofaa miti. Barattoonni torba qaroo dhabeeyyii ta'an jiru.
Yunivarsiitiin qarshii nuuf kennaa jira garuu gahaa miti. Akkatti qo'annuuf qarshii 500 nuuf kanfalu. Namni qarshiidhaan nuuf dubbisa. Mana Kitaabaatti kitaabnu nuuf ta'u waan hinjirref qarshiin kuni gahaa miti.
Ijikoo wanta hin agarreef immoo namni akka naaf dubbisuuf qarshiin baay'ee na barbaachisa. Hojii manaallee bireeliidhaan erga barreessinee kan iji isaanii arguun garagalchiifna.
Sababa kanaan, barnoota walakkaa dubbisee rakkoo maallaqaan isa kaan dhiisa jechuudha. Gosa barnootaa qarshii kanfalee qo'adhe, qabxii 'A'n qaba. Kan hin qo'annemmoo gad-aanaa na jalaa dhufe.
Warri iji isaanii argu nutti siquu hin barbaadani. Diida nama qabuun kuni ni jira. Nuti isaan waliin waligaluu barbaanna malee isaan nutti dhihaachuu hin barbaadani.
Qabxii kiyya ilaalanii dandeetti qabdi kan jedhun isaan nutti dhihaatu malee baay'inaan nuti dandeettii hinqabnu taanaan namni nutti siqu hinjiru.
Qaroon isaanii kan argu keessaa kan itti dhihaadhu mucayyoo tokko qofa. Yoo dareen jiraate ishumatu naaf bilbila. Yoo dubbisa ta'es ishuma kadhadhee naaf dubbisti.
Isheedhuman rakkisa kaa maaliifi isheen warra kaanirraa rakkoo kiyya waan hubattuufu isheedha hiriyyaan koo.
Kitaabni nuuf qophaa'e waan hin jirreef dubbisa barsiisaan kennu alatti mana kitaabaa teenyee beekumsa dabalataa argachuu hin dandeenyu.
Mana kitaabaa gaafan dhaqe ijoollee irraa isan waraabe taa'een dhaggeeffadha. Nama kadhachuurra osoo kitaabni qaroo dhabeeyyii jiraate akkuma isaanii taa'een qo'adha ture.
Osoo qaroon keenya arga tahe qabxiin keenya ol taha. Waan tattaafannuuf garuu jara qaroon isaanii argu gadii miti.
Qaroo dhabuu jechuun…
Qaroo dhabuu jechuun miira qaamaa shanan keessaa tokko dhabu jechuudha. Kana jechuun garuu nuti namaa gadi miti. Eenyumtuu kan hojjetu hojjechuu dandeenya.
Nuti qaroo hin dhabne. Nuti kan dhabne ifa isaati malee qaroon keenya bakka isaa hinbanne.
Qaroo dhabuun waan dhabde
Maatii nagargaaruu hin dandeenye keessaa dhalachuunkoo baayee tokko natti dhagahama.
Osoo rakkoo koof furmaata naa kennuu danda'u ta'e garuu wanti natti dhagahamu hin jiru.
Hawwiin koo gara fulduraa namoota qaama miidhamaa hintaane waliin walitti dhufeenya uumuufi rakkoo ummata keessa jiru, keessumaa kan qaama miidhamtootaa, furuuf yaada qaba.
Yoo dhimmi keenya kan nuuf furu dhabnellee nuti qaama miidhamtoonni callisuu hin qabnu.
Rakkoo qaama miidhamtootaa kan furuu qabu ummatadha. Ummanni ofii isaatii nutis lammii biyyaa waan taanef nuuf furuu qaba.
Namoonni rakkoo dachaa jireenya isaanii keessatti isaan qaqqabe mo'atanii hedduuf fakkeenya ta'an hedduudha. Barattuu Xurunash illeen kanaaf rakkoo ishee mudataniif harka hin kennine.
Hunda caalaa garuu rakkoowwan ijoo qaama hawaasaa hir'ina qaamaa qaban kana, hanqina haala barnootaa mijataa dhibefi ilaalcha hawaasaa osoo jijjiiranii, milkaa'ina lammileefi guddina biyyaa hunda galeessa milkeessuudha.
Kun ammoo gahee namootaafi dhaabbilee hundaati.